အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Posted by nandakyawswar1 on February 16, 2013 at 4:14pm in General Discussion
ကျွန်တော့်ကို နဲနဲလောက်သိတဲ့သူ ကူညီပေးပါအုံး. ကျွန်တော့် External Hard Disk က ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ရင် လုံးဝမသိတော့ဘူး Device ကို မဖတ်တော့ပါ. အထဲမှာ အရေးကြီး Data တွေရှိလို့ပါ ဘယ်လိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာ နည်းလမ်းလေးတွေ ဝေမျှပေးပါအုံး .......... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Permalink Reply by thadaungsarlay on February 17, 2013 at 10:20pm ဘယ် OS သုံးတာလဲ ခင်ဗျ... HD ကောင်းမကောင်းသေချာပြန်စစ်ပါ...လိုအပ်ရင် Brand,Model တွေကို Google မှာရှာကြည့် ပါ Driver လိုအပ်ရင် ဒေါင်းပါ။
Permalink Reply by suyutu on February 18, 2013 at 12:29am တကယျလို့ data ကအရေးကွီးတယျဆိုလို့ရှိရငျ ပါဝါ ထပျမပေး တာကပိုကောငျးမယျလို့ထငျပါတယျ။ တဈခြို့harddisk တှကေပါဝါပေးလိုကျရငျ data ပါပြောကျသှား တတျပါတယျ၊ လုံးဝ ပကျြမသှားခငျကဘာတှဖွေဈသေးသလဲ။ ဥပမာ အသံမွညျတာတို့၊ ကောငျးလိုကျ။ မကောငျးလိုကျဖွဈတာတို့ပေါ့။ ပွောပွပေးပါအုံး။
Permalink Reply by WINEYUAUNG on February 19, 2013 at 8:14pm lonelonelaye@gmail.com
Ple add my email acc
Permalink Reply by nandakyawswar1 on February 21, 2013 at 11:29am ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်